Nsuku zonke izingane zethu uxhumana kontanga futhi ngesikhathi esifanayo sithathe eziningi izifo ezisukela umkhuhlane ukuze yizifo eziyingozi. Ngenxa yalokho, ezincane kwesiyingi abangane ingane, mancane eyolanda iyiphi obukhulu. Molluscum Contagiosum ungomunye walabo izifo ngocansi ngqo ngokuthintana zomuntu onesifo. Virus ukuba singangena izingane nje kuphela kodwa futhi abadala.
Clams esikhumbeni ezinganeni sibonakalise kumiswa olulodwa futhi amaningi Izigaxana enyameni umbala ku kokuphela izinsuku eziyishumi nane ngemuva yokushayiswa igciwane emzimbeni.
Basuke kwakhiwa ebusweni, ezingalweni, esifubeni kanye nasemilenzeni. Clams ebusweni imbangela ukulunywa, futhi ukuthi kunesidingo esiphuthumayo sithathe izinyathelo zokuvimbela ukuba ingane waklebhula ifindo. Lokhu kungaholela Ukungena we kwegciwane. Ngakho-ke, kungase kubangele ububomvu ngisho iqhubeka, kanye nokuthuthukiswa dermatitis.
Izigaxana Kwakheka evelayo molluscs ebusweni nomzimba, zidinga ukuhlolwa ngokushesha onguchwepheshe ngubani imithi yokwelapha ingane. Ngokuvamile kuhambisana ukususwa izinhlangano ngesipuni ekhethekile okubabayo, enye ngemva kwenye. Inqubo kubuhlungu, ngakho aba maningi uma kuthengwa semali izakhiwo izinzwa wendawo. Nokho, kwezinye izimo, izimbaza ezinganeni zabo ukwelashwa hhayi eyenziwa, nawo ngokwawo.
Ukuze abone sifo ingane ngendlela efanele usaqala, kubalulekile ukwazi ukuthi ingxenye eyinhloko yomzimba, okuyinto ziyabonakala imfundo - ebusweni nezandla. Shellfish uvele ebusweni nezandla zidinga ukuxilongwa ngokushesha nokwelashwa. I causative ejenti - igciwane ukuthi kuthinta amasosha omzimba, okwenza kube ababuthakathaka. Isimo esibi izivikeli mzimba kungabangela Ukungena ku umzimba contagiosum ingane molluscum. Ngakho-ke, ngesikhathi egula wengane kuyadingeka ukuze bathole isamba elanele amavithamini ukuze alondoloze futhi ukuqinisa amasosha omzimba. Phakathi ukwelashwa, isidingo sengane azokuqhubela wekulihlanta magciwane amathoyizi. Zombhede kufanele ngamanzi ashisa kakhulu kanye ayina okwalandela ikumodi bula. Ngokukhethekile kufanele ikhokhwe yokugezela, echibini kanye yangasese: ikakhulukazi igciwane uhlala ezindaweni ezinothuli futhi manzi. Umntwana nhlobo ukuya ezindaweni zomphakathi, ezifana okubhukuda kanye Spas.
Uma uqaphela ukuthi ingane yakho ine-molluscs ebusweni, ngokushesha kudokotela. Ukuzilapha ka molluscum contagiosum igciwane igcwele yezinkinga ingasheshi inqubo yokwelapha. Abazali kudingeka ukuhambisana nayo yonke izincomo udokotela. Isici esibalulekile yokutakula somntwana Ukudla wayo elungile futhi ephelele. Kufanele imumathe amaningi izithelo nemifino. Lapho ofunda isifo noma abangane wengane kufanele bathathe izinyathelo zokuzivikela emva kokuthintana onguchwepheshe. Khumbula, uma ukudla ingane yakho wehlukile futhi kuhlanganisa eziningi izithelo nemifino, izivikeli mzimba ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi igciwane ngaphambi ukuqala ngamawala.
Idlala Pharyngeal. Hypertrophy we idlala pharyngeal
Loluhlelo zezimali ibhizinisi: izici nezici sokulungiselela. uhlelo lwezezimali 'yokutakula' inhlangano
Uhlobise izinhlanzi gourmets